11:09 am, सोमबार, फाल्गुन १२, २०७६
काठमाडौं । नेपालमा इलेक्ट्रीक सवारीसाधनको बिक्री अघिल्लो वर्ष करिब २०० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको थियो । सरकारले इलेक्ट्रीक गाडी प्रयोगलाई बढवा दिन विभिन्न किसिमको छुट लगायतका अफर गरिरहेको छ । उसोत सरकार आफैँ सार्वजनिक यातायातमा इलेक्ट्रीक गाडीको प्रयोग गर्न भन्दै लगानी समेत गरिरहेको छ ।
निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गाडी इलेक्ट्रीक हुँदा त्यसले धेरै किसिमका फाइदा पुग्ने हुँदा पछिल्लो समय धेरैको रोजाइमा इलेक्ट्रीक कारहरु पर्ने गरेका छन् । यस्तोमा हामीले इलेक्ट्रीक कारले दिने केही फाइदाको विषयमा यहाँ चर्चा गर्न गइरहेका छौं ।
१, सञ्चालन खर्च कम
नेपालमा गाडी किन्नु भनेको निकै ठूलो खर्च गर्नु पर्ने विषय हो । अहिले इलेक्ट्रीक कारमा सरकारले भन्सार, अन्तःशुल्क, सडक दस्तुरलगायतको शिर्षकमा भारी छुट प्रदान गरेको कारण कम मूल्यमा उत्कृष्ट फिचर उपलब्ध कार किन्न सकिने अवस्था रहेको छ ।
यसले प्रिमियम गाडी कम मूल्यमा किन्न पाइन्छ भने, एक पटक किनेपछि मर्मत, सर्भिसिङ गर्ने खर्चसमेत अत्यन्त न्यून हुन्छ । ल्यूव आयलकाे आवश्यक्ता नै पर्दैन । एउटा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको वार्षिक औषत मर्मतसम्भार खर्च करिब ६० हजार हाराहारीमा आउँछ भने इलेक्ट्रीकको वार्षिक खर्च १० हजार हाराहारी मात्र पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुले गरेको सर्भेले देखाएको छ ।
यसका साथै नेपालमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको आयात र त्यसमा लाग्ने खर्चसमेत इलेक्ट्रीक सवारीसाधनले बचाउने छन् । नेपालमा आफ्नै क्लिन इनर्जी स्रोतबाट उत्पादन गरिएको उर्जा उपलब्ध रहेकाले यसको फाइदा अझ धेरै हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट गाडी चलाउँदा औषतमा प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने इलेक्ट्रीकबाट चलाउँदा प्रतिकिलोमिटर १ रुपैयाँ २० पैसा मात्र खर्च हुने देखिएको छ ।
२. वातावरण मैत्री
विश्वको ठूलो टाउको दुखाई बनेको ग्लोवल वार्मिङको मुख्य कारण सवारीसाधनले फ्याक्ने प्रदुषण रहेको छ । यस्तोमा इलेक्ट्रीक सवारीसाधन शून्य प्रदुषण गर्ने साधनको रुपमा विकास भएकाले यसले विश्वकै वातावरण जोगाउन मद्दत गर्छ ।
त्यसैले हाम्रा हाइड्रोपावरबाट उत्पादन भएका विजुलीको प्रयोगबाट गाडी गुडाउँदा आफ्नो उत्पादनको प्रयोगको साथै इन्धनमा गर्ने खर्च समेत घट्ने हुँदा यसको दोहोरो फाइदा नेपालले लिन सक्ने अवस्था रहेको छ ।
३. चालकको लागि नयाँ अनुभव
इलेक्ट्रीक सवारीसाधन नयाँ टेक्नोलोजीमा आधारित रहेर उत्पादन भएका हुन्छन् । यसमा अटोमोवाइल क्षेत्रमा आविष्कार भएका नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग भएकाले यसलाई चलाउँदा नयाँ अनुभव गर्न सकिन्छ ।
यसमा रहने उत्कृष्ट पावर, तत्काल सृजना हुने शक्ति (टर्क) र विभिन्न किसिमका ड्राइभिङ मोडको विल्कुलै नयाँ अनुभव चालकले गर्न पाउने छन् ।
४. तेल हाल्ने लाइनबाट मुक्ति
इलेक्ट्रीक कार लिएर पेट्रोल पम्प धाउनु पर्ने अवस्थाबाट मुक्ति मिल्ने छ । नेपालमा सिजन अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको वितरण प्राणलीमा समस्या आइरहेको हुन्छ । त्यस्तोमा महंगो मूल्य हालेर लाइनमा बसेर इन्धन भर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन सकिन्छ । आफ्नो कार्यालय वा घरमै आरामले रिचार्ज गर्न सकिन्छ ।
अब विश्वको ध्यान इलेक्ट्रीक कार निर्माण र प्रयोगमा गइसकेको छ । हरेक कम्पनीले अर्बौ डलर खर्च गरेर इलेक्ट्रीक कार उत्पादनमा नयाँ अन्वेषण र खोज गरिरहेका छन् । यसले अबको यातायातको साधन इलेक्ट्रीक बन्ने निश्चित प्रायः रहेको छ ।
अहिले ठूला हवाइजहाज,रेल, ट्रक, बस, जीप, कार, भ्यान, मोटरसाइकल, स्पोर्टस बाइकदेखि साइकलसम्म इलेक्ट्रीक उत्पादन गर्न उत्पादकहरु कसिएका छन् । यसमा उनिहरुले ठूलो सफलता प्राप्त गरिसकेकाले अबको विश्वकाे यातायातको साधन इलेक्ट्रीक बन्नेमा दुईमत छैन ।